Daawo sida Nabad Sugidda Soomaaliya ula dagaalantay ragii weeraray Godka Jilacow – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Markii shalay dhowr nin oo ka tirsan Alshabaab weerar qaraxyo iyo rasaas ah la beegsadeen xarrunta Xabsiga loo Yaqaano Godka Jilacow ayaa dowladda Soomaaliya sheegtay in ciidamada Nabad Sugiddu si fudud usoo afjareen ragas weerarka geystay.
War kasoo baxay xafiiska wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkaaas qaataymudo 45 daqiiqo ah.
Weerarka Alshabaab ku qaadeen Xabsiga Godka Jilacow ayaa waxaa lagu dilay 7 ka tirsan Alshabaab, 3 askari iyo 2 rayid ah.
Ragga Al-Shabaab-ka ah ee weerarka ku qaaday xabsiga ayaa dowladdu sheegtay in 5 kamid ah ku labisnaayeen tuutaha ciidanka nabadsugida.
Waxay xabsiga ku soo weerareen labo gaari oo qaraxyo ku xiran yihiin oo la gubay. Weerarkan argagixiso ayaa waxaa ku dhintay 3 kamid ah ciidanka nabadsugida iyo 2 qof oo rayid ah.
Col. Maxamed Xasan oo ka mid ah sa